म्याग्दीका रिजाल व्यवसायीक बाख्रापालनबाट बार्षिक १५ लाख आम्दानी – Info Bazar
म्याग्दीका रिजाल व्यवसायीक बाख्रापालनबाट बार्षिक १५ लाख आम्दानी
म्याग्दी – म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–९, तोरीपानीका आनन्द रिजालले बाख्रापालनबाट मनग्गे आम्दानी गर्दै आएका छन् । २१ वर्षसम्म काठमाडौंको एक निजी कम्पनीमा काम गरेका उनले जागीर त्यागेर २०७१ मा व्यावसायिक बाख्रापालन शुरू गरे । बाख्रापालनबाटै वार्षिक १५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्न सफल भएका उनी अहिले सबैका प्रेरणाको स्रोत बनेका छन् ।
शुरूमा ८ ओटा स्थानीय जातका बाख्राबाट व्यवसाय शुरू गरेका रिजालको खोरमा अहिले ७२ ओटा बाख्रा छन् । उनले आधुनिक खोर निर्माण गरी बोयर (उन्नत) जातका बाख्रापालन गरेका छन् । ‘धौलागिरि व्यावसायिक बाख्रापालन बोयर मोडल फार्म’ नै दर्ता गरी व्यवसाय शुरू गरेका उनकोे फार्ममा हाल सबै बोयर (उन्नत) जातका बाख्राहरू छन् ।
फार्ममा उत्पादन हुने बोका, खसी विक्री गरेर आफू राम्रो आम्दानी गर्न सफल भएको उनले बताए । एउटा बोयर जातको बोकाको मूल्य न्यूनतम रू. १८ हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्ममा विक्री हुने उनले जानकारी दिए । ‘बोयर जातको बाख्रापालनबाट छोटो समयमै राम्रो फाइदा लिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘मैले एउटै बोका रू. ३ लाखसम्ममा बेचेको छु ।’ लगानी र समयको आधारमा यो निकै राम्रो कमाइ रहेको उनको भनाइ छ । फार्ममा अहिले देशका विभिन्न जिल्लाबाट व्यापारी बाख्रा खरीद गर्न आउने गरेको उनले बताए । बोयर जातको बाख्रालाई उत्कृष्ट मानिने भएकाले व्यापारीहरू खरीद गर्न खोजीखोजी आउने हुँदा बोयर पालनलाई प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ ।
व्यावसायिक बाख्रापालनको थालनी गरेका रिजालले घाँसका लागि ३६ रोपनी जग्गामा घाँस लगाएका छन् । ‘घाँसको व्यवस्था गर्न मैले खेतबारीमा भुइँघाँसका रूपमा जै–घाँस र डालेघाँसका रूपमा खनिउ, रायखन्यु, निमारो, चुलेत्रो, दुधिलो, टाँकी, बेडुलो, सुपरनेपियर, सेतरिया लगायत बिरुवा रोपेको छु,’ उनले भने, ‘भुइँघाँस सिँचाइका लागि पानी संकलन गर्न पोखरी समेत निर्माण गरेको छु ।’
व्यावसायिक बाख्रापालनमा सक्रिय रिजाल सामाजिक कार्यमा पनि संलग्न रहँदै आएका छन् । जिल्ला बाख्रापालन व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष रहेका उनी स्थानीय भूमे आधारभूत विद्यालय, काफलबोटको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र निलोपहरा सामुदायिक वन समूहका सदस्य समेत हुन् ।
This Page Total Views: 1,251